Ny Fitsarana farany, Fiangonana Iraisam-pirenena any Switzerland (WKG)
«Ho avy ny lovia! Ho avy ny fitsarana! Mibebaha izao, fa handeha any amin'ny helo ». Mety ho efa naheno mpitoriteny evanjelika be dia be nikiakiaka ireo teny nanandrana nampatahotra ny olona ho fanekena an'i Kristy. Na, mety efa nahita olona toy izany faran'izay sarimihetsika miaraka amin'ny endrika mangdlin ianao. Angamba tsy dia lavitra loatra ny sarin'ny “fitsarana mandrakizay” izay ninoan'ny kristiana maro nandritra ny taonjato maro, indrindra tamin'ny Moyen Âge. Azonao atao ny mahita sary sokitra sy sary hosodoko maneho ny olo-marina mihaona hihaona amin'i Kristy sy ny tsy marina izay tarihin'ny demonia lozabe. Ireto sary ireto amin'ny Fitsarana farany, ny fitsarana ny fiafarana mandrakizay, dia avy amin'ny fanambarana ao amin'ny Testamenta Vaovao momba an'io. Ny Fitsarana farany dia ampahany amin'ny fampianaran'ny "zavatra farany" - ny fiverenan'i Jesosy Kristy, ny fitsanganan'ny marina sy ny tsy marina, ny faran'ny tontolo ratsy ankehitriny, izay hosoloana ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra.
Ny Baiboly dia manambara fa ny fitsarana dia tranga lehibe ho an'ny olona rehetra izay niaina araka ny tenin'i Jesosy mazava: «Nefa lazaiko aminareo fa amin'ny andro fitsarana dia mila manisy fitantarana ny teny rehetra tsy ampiasainy ny fitsarana. manana. Ny teninao no hamarinina anao, ary ny teninao no hanamelohana anao » (Matio 12,36: 37). Ny teny grika nadika hoe "fitsarana" izay nampiasaina tamin'ny andalan-teny ao amin'ny Testamenta Vaovao dia krisis, izay niavian'ny teny hoe "krizy". Ny krizy dia manondro fotoana sy tranga iray izay anaovana fanapahan-kevitra iray na fanoherana ny olona iray. Raha ny hevitr'izany, ny krizy iray dia teboka iray amin'ny fiainan'ny olona iray na eo amin'izao tontolo izao. Ny krizy manokana dia manondro ny fiasan'Andriamanitra na ny Mesia ho mpitsara an'izao tontolo izao amin'ny antsoina hoe Andro Farany na Andro Fitsarana, na azontsika atao ny milaza ny fiandohan'ny "fitsarana mandrakizay".
I Jesosy dia namintina ny fitsarana amin'ny ho avy momba ny marina sy ny ratsy toy izao manaraka izao: “Aza gaga amin'izany. Fa ho avy ny andro izay handrenesan'izay rehetra any am-pasana ny feony ary hivoaka izay nanao soa, ny fitsanganana amin'ny fiainana, fa izay nanao ratsy, ny fitsanganana amin'ny fitsarana » (Jaona 5,28).
Jesosy koa dia nanonona ny toetran'ny Fitsarana Farany amin'ny endrika ara-panoharana toy ny fisarahana ny ondry amin'ny amboadia: "Fa rehefa tonga ny Zanak'olona amin'ny voninahiny, ary ny anjely rehetra miaraka aminy, dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy sy ny firenena rehetra. hangonina eo anoloany izy. Ary hampiavaka azy roa lahy izy tahaka ny mpiandry ny manasaraka ny ondry amin'ny osy, ary hametraka ny ondry eo ankavanany ary ny osy eo amin'ny ankavia » (Matio 25,31: 33).
Ny ondry eo ankavanany dia ampahafantarina ny tso-dranony amin'ireto teny manaraka ireto: "Avia aty, tahio ny raiko, mandova ny fanjakana izay voaomana ho anao hatrany am-piandohan'izao tontolo izao!" (V. 34). Ampahafantarina koa ny hiafaran'izy ireo ny osy: "Ary amin'izay dia hiteny amin'izay eo ankavia kosa izy:" Mialà amiko, ianareo izay voaozona, mankany amin'ny afo mandrakizay izay voaomana ho an'ny devoly sy ny anjeliny! " (V. 41).
Ity toe-javatra iainan'ny vondrona roa ity dia manome fahatokisana marina ary manosika ny olon-dratsy ho ao anatin'ny fotoan-tsarotra tsy manam-paharoa: «Ny Tompo dia mahalala ny hamonjy ny mpino amin'ny fakam-panahy, fa ny mitazona ny tsy marina amin'ny andro fitsarana hanasaziana azy ireo» (2 Petera 2,9).
I Paoly koa dia miresaka ny momba io andro fitsarana roa io, ka antsoina hoe "andro fahatezerana izay hisehoan'ny fitsarana marina" (Romana 2,5). Hoy izy: «Andriamanitra, izay hanome ny olona rehetra araka ny asany: fiainana mandrakizay ho an'izay, amin'ny faharetana, amin'ny asa tsara, dia mitady voninahitra, haja ary fiainana tsy mety maty; Ny fahafaham-baraka sy ny hatezerana kosa, amin'ireo manohitra sy tsy mankatò ny fahamarinana, fa mankatò ny tsy rariny » (And. 6-8).
Ny fizarana ara-Baiboly toy izany dia mamaritra ny fotopampianaran'ny Fitsarana Mandrakizay na Farany amin'ny teny tsotra. Izy io na toe-javatra; misy ireo navotana ao amin'i Kristy sy ireo tsy voatsabo ho very izay very. Ny ampahany sasany amin'ny fizarana vaovao dia manondro ny "Fitsarana farany" ho fotoana sy toe-javatra izay tsy misy afa-mandositra. Angamba ny fomba tsara indrindra hahazoana tsiro amin'ity fotoana ho avy ity dia ny famakiana ampahany vitsivitsy manonona izany.
Ny taratasy ho an'ny Hebreo dia miresaka ny fitsarana ho toe-javatra krizy izay hiatrika ny olona rehetra. Izay ao amin'i Kristy, izay voavonjy amin'ny asany manavotra, dia hahita ny valisoany: «Ary tahaka ny nanendrena ho faty indray mandeha ny olona, ​​fa aorian'izany fitsarana izany: dia toy izany no nanaterana an'i Kristy natao sorona mba hanesorana ny heloky ny maro; fanindroany dia tsy hiseho izy noho ny ota, fa amin'izay miandry Azy famonjena » (Hebreo 9,27: 28).
Ireo olona voavonjy izay nohamarinin'ny asa fanavotana azy dia tsy tokony hatahotra ny Fitsarana farany. Nanome toky ny mpamaky i Johannes hoe: “Izao no tiantsika, dia matoky ny andro fitsarana isika; satria amin'ny maha-Izy Azy dia ato amin'ity tontolo ity Tsy ao am-pitiavana ny tahotra » (1 Jaona 4,17). Ireo izay an'i Kristy dia hahazo ny valisoany mandrakizay. Ny ratsy fanahy dia hiharan-doza. "Ary ny lanitra izay ankehitriny sy ny tany dia voavonjy amin'ny alalàn'ny afo ihany, voavonjy ho amin'ny andro fitsarana sy ny fanamelohana ny olona tsy mpino" (2 Petera 3,7).
"Lozanao, Chorazin! Lozanao, Betsaida! Fa i Tyro sy Sidona dia handefitra kokoa amin'ny fitsarana noho ianao » (Lioka 10,13-14). «Ny mponin'i Ninive dia hiseho amin'ny Fitsarana farany amin'ity firaisana ity ary hanameloka azy io. Ny Mpanjakavavin'ny atsimo [izay tonga hihaino an'i Solomona] dia hipoitra amin'ny Fitsarana farany amin'ity firaisana ity ary hanameloka azy » (Matio 12,41: 42). Ireto ny olona avy any amin'ny tanàna taloha - Tyro, Sidona, Nineveh - izay mazava ho azy fa tsy nanana fahafahana handre ny filazantsara na hahalala ny asa famonjena nataon'i Kristy. Saingy hitan'izy ireo ny fanamelohana, ary amin'ny fahatongavany eo anoloan'ny Mpanavotra azy ireo dia mandefa hafatra manameloka an'ireo izay nandà azy tamin'ity fiainana ity izy ireo.
"Ho fanamelohana ny andro lehibe, dia nitazona ireo anjely koa izy, izay tsy nitana ny toerana misy azy any an-danitra fa nandao ny fonenany, niaraka tamin'ny fatorana mandrakizay tao amin'ny haizina. Ka dia i Sodoma sy i Gomora ary ireo tanàna manodidina azy, izay toa azy ireo, dia nijangajanga sy nanenjika nofo hafa, ohatra, nametraka sy hijaly ny afon'ny afo mandrakizay » (Jodasy 6-7).
Fa i Jesosy kosa dia nilaza ny amin'ireo tanàna amin'ny fitsarana ho avy. "Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny tanin'ny Sodoma sy Gomora dia ho moramora kokoa amin'ny andro fitsarana noho io tanàna io (izay tanàna tsy noraisin'ireo mpianatra]" (Matio 10,15).
Izany dia mety milaza fa ny fisehoan-javatra amin'ny Fitsarana Farany na ny Fitsarana Mandrakizay dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra eken'ny kristiana maro. Sholley C. Guthrie, ilay teolojiana efa niasa farany, dia nanoro hevitra fa tsara ny hamerina ny fomba fisainantsika momba an'io krizy io: ny voalohany nieritreritra ny Kristiana rehefa mieritreritra ny hiafaran'ny tantara dia tsy tokony hatahotra na hamaly faty. momba ny hoe "anatiny" na "hiakatra" na iza "ho any ivelany" na "hidina". Tokony ho eritreritra feno fankasitrahana sy fifaliana izany satria afaka miandrandra am-pahatokiana isika rehefa ny sitrapon'ilay Mpahary, Mpampionona, Mpanavotra sy Mpanavotra indray no hanjaka indray mandeha - amin'ny fotoana rehetra ny fahamarinana momba ny tsy fahamarinana, ny fitiavana ny fankahalana sy ny fitiavan-tena, ny fandriampahalemana noho ny fankahalana, ny maha-olombelona noho ny tsy fahatomombanana, ny fanjakan'Andriamanitra dia handresy ny herin'ny maizina. Ny fitsarana farany dia tsy ho fanoherana an'izao tontolo izao, fa ho tombontso'izao tontolo izao. Vaovao tsara izany, tsy ho an'ny kristiana ihany, fa ho an'ny rehetra!
Eny tokoa, izao no zavatra farany, anisan'izany ny Fitsarana farany na Fitsarana Mandrakizay: ny fandresena ilay Andriamanitry ny fitiavana amin'ny zavatra rehetra izay mijoro amin'ny làlan'ny fahasoavany mandrakizay. Noho izany, hoy ny apôstôly Paoly: «Ary rehefa afaka ny farany, dia hatolony an'Andriamanitra Ray ny fanjakana taorian'ny nandringany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny herisetra. Satria tsy maintsy manjaka izy mandra-panaon'Andriamanitra ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahavalo farany horavana dia ny fahafatesana » (1 Korintiana 15,24: 26).
Ilay ho eo amin'ny Fitsarana farany, ny mpitsara ireo izay nohamarinin'i Kristy sy ireo mbola mpanota dia tsy hafa fa Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy ho avotra ho an'ny rehetra. "Fa ny ray tsy mitsara olona" hoy i Jesosy, "fa ny fitsarana rehetra dia nomeny ny zanaka. (Jaona 5,22).